पूर्वानुमान, तपाईंको लक स्क्रिनमा एनिमेटेड मौसम (Cydia) | आईफोन समाचार
हामी हाम्रो लक स्क्रिन परिमार्जन गर्न जारी राख्छौं, र आज हामी आखिरमा साइडिया ट्वीकको बारेमा कुरा गर्न सक्दछौं जुन हामीलाई धेरै समय अगाडि घोषणा गरिएको थियो र हामी मध्ये धेरैजना अगाडि हेर्दै थियौं: पूर्वानुमान। यो चिम, डेविड अश्मानले बनाएको हो, अरूहरू मध्ये लकिनफोका सिर्जनाकर्ता, मौसमको पूर्वानुमान हाम्रो लकस्क्रिनमा ल्याउँछ, साथ एनिमेटेड वालपेपर जुन दिन र मौसमको आधारमा परिवर्तन हुन्छ। यसले हामीलाई अर्को घण्टा र दिनहरूको लागि भविष्यवाणीको साथ समान लक स्क्रिनको दोस्रो पृष्ठमा पनि पहुँच दिन्छ।
पूर्वानुमान पूर्ण रूपमा छ जो पहिले यो किनेको छ को लागी नि: शुल्क, र पहिलो पटक खरीददारहरूको लागि ०.0,99। मूल्य छ। पूर्ण रूपमा मर्मत गरिएको भए पनि, यसको विकासकर्ताले यसको लागि फेरि शुल्क लिन चाहँदैन, जो अरू धेरैको लागि राम्रो उदाहरण हो, र यसलाई मेरो रायमा उचित मूल्यवान् मूल्य दिन्छ। पूर्वानुमानले प्रणाली सेटि withinहरू भित्र कन्फिगरेसन मेनू सिर्जना गर्दछ, जहाँ तपाईं देखाउन चाहानुभएको जानकारी कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ, मौसमको वर्तमान अवस्था, पूर्वानुमान, दुबै वा दुवैको छनौट गर्न सक्षम हुँदै। यदि तपाईं लक स्क्रिनमा र / वा स्प्रिboardबोर्डमा समयसँगै पृष्ठभूमि हेर्न चाहानुहुन्छ, साथै तपाईं यसलाई एनिमेटेड चाहानुहुन्छ भने तपाईं कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंले अर्को दिनको बारेमा जानकारी सक्रिय गर्नुभयो भने, तपाईंको औंला लक स्क्रिनमा दायाँबाट बाँया स्लाइड गर्नुहोस् र तपाईं मौसम पूर्वानुमान पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई कहाँबाट जानकारी पाउनुहुन्छ? धेरै सरल, iFile प्रयोग गरेर फाइल परिमार्जन गर्न केहि पनि छैन, योबाट टाढा। यो पहिलो स्थानको डाटा लिन्छ जुन तपाईंले नेटिभ मौसम अनुप्रयोगमा समावेश गर्नुभयो IOS को। यदि यो हालको स्थान हो भने, यो तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ, यदि यो स्थिर शहर हो भने, यो सधैं समान देखाईनेछ।
वैसे, लक स्क्रिनको हेराई समाप्त गर्न समाप्त गर्न, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु स्थापना गर्नुहोस् सबटललक पूर्वानुमानको अतिरिक्त, स्क्रिनशटहरूमा तपाईले देख्नु भए जस्तै स्क्रिन रहनेछ।
थप जानकारी - SubtleLock ले तपाइँको लक स्क्रिन को उपस्थिति परिमार्जन गर्दछ (Cydia)
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » पूर्वानुमान, तपाईंको लक स्क्रिनमा एनिमेटेड मौसम (Cydia)
मैले यसलाई आईफोन installed मा स्थापना गरेको छु र यो कालो देखिन्छ। धन्यबाद
Minivoley लाई जवाफ दिनुहोस्
त्यो पहिलो संस्करणहरूमा भयो। अब यो राम्रोसँग काम गर्दछ। Cydia बाट अपडेट।
के तपाईंलाई थाहा छ यदि यो डायनामिकटेक्स्टसँग असंगत छ ???
Aj83 लाई जवाफ दिनुहोस्
कुन भण्डारबाट म यसलाई डाउनलोड गर्छु।
के यो त्यस्तो हुन सक्छ जब सबटलाक स्थापना गर्दा सूचना केन्द्र दुबै आईफोन and र आईफोन on मा प्रवाहित हुँदैन?
Joaseman लाई जवाफ दिनुहोस्
त्यो मात्र होईन, मेरो लागि सबै प्याडलमा जान्छ, सेटिंग्समा स्क्रोल वा वाट्सएप उदाहरणको लागि पनि, सामान्यतया जर्कोमा सबै कुरा ... मैले यसलाई डे-स्थापना गर्नुपर्‍यो।
म मतलब Subtlelock, अवश्य
मसँग सबटलाक स्थापना हुँदा यो हुन्छ, जब मैले यसलाई स्थापित गरें भने दुई पटक मैले यसलाई झकझक्याउन जाँदै थिएँ, व्हाट्सएपमा जब यो लेखिएको थियो, मैले आईफोन have पाएँ।
KaBuTTo लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार एनिमेटेड वालपेपरको साथ ब्याट्री खपत कसरी हुनेछ?
Alvarillo लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन have छ र मेरो स्क्रिन कालो छ? म के गरूँ?
तपाई कुन रेपो नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ? अग्रिम धन्यवाद
PS4 लाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ यदि यो आफैं अपडेट हुन्छ वा कति पटक यो गर्छ? वा तपाईंले मौसम अनुप्रयोगको डाटाको दोस्रो प्लेनमा अपडेट सक्रिय गर्नुपर्‍यो? मसँग कहिले पनि स्थान सक्रिय गरिएको छैन र यसले मौसम स्क्रमा मैले चयन गरेको पहिलो स्क्रिनबाट डाटा लिन्छ। मैले जर्कस याद गरेको छैन। मसँग एक आईफोन S एस छ जसमा सबटेलक र जेलिलोक installed पनि स्थापित छ।
म अद्यावधिक हुँदिन यदि म श्वास दिंदैन र मसँग मौसम अनुप्रयोगको पृष्ठभूमि अपडेट छ, त्यसैले मलाई कसरी मौसम अपडेट हुँदैछ भनेर स्पष्ट छैन।
कहाँबाट पूर्वानुमान डाउनलोड गर्न को लागी
मोइलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि म राख्छु
- लकस्क्रिनमा देखाउनुहोस्
वालपेपर सक्रिय गर्नुहोस्
म कालोमा पृष्ठभूमि पाउँछु, क्यान्भियोमा यदि मैले मेरो पृष्ठभूमि प्रयोग गरें भने, मौसम जानकारी सही रूपमा आउँदछ, र मेरो पृष्ठभूमिको साथ, अरू कसैलाई यो समस्या छ?
Cydio लाई जवाफ दिनुहोस्
यही कुरा मलाई भयो, र ती हुन् मेरो पृष्ठभूमि यदि तपाईले तिनीहरूलाई देख्नु भयो भने तपाईले जे देख्नुहुन्न त्यो समयका लोगोहरू हुन् (जुन सूर्य बादल इत्यादि हुन्।)
मौसम जानकारी अद्यावधिक छ कि छैन? यो मलाई दिन्छ कि तिनीहरूले हामीलाई ट्यान्ज गरेका छन् ... ..
Dj hok भन्यो
मेरो आईफोन On मा वर्षाको एनिमेसन सँधै बाहिर आउँदछ, र त्यहाँ यस्तो सूर्य छ जुन तपाईंले देख्न सक्नुहुन्न! सामान्य मोडमा फर्कनुहोस् जब सम्म तपाईं आईफोनको स्थान हटाउनुहुन्न। म छिट्टै अद्यावधिकहरूको प्रतीक्षा गर्छु!
Dj.Hok लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग मेरो आईफोन Safe मा सेफ मोड समस्याहरू छैनन्। अपडेटको मुद्दाले मलाई अलिकति अलमल्लमा पारेको छ। मैले विकासकर्तालाई सोधेको छु, यदि उसले मलाई जवाफ दियो भने, म टिप्पणी गर्नेछु।
येशू सोर्नोजा भन्यो
मैले यो पूर्वानुमान अनुप्रयोग खरिद गरें, र यसलाई मेरो ihpone 5s मा स्थापित गरेँ र यसले कार्य गर्दैन। SubtleLock स्थापना गर्नुहोस् यदि यो काम गर्दछ भने।
त्रुटि तपाईंले मलाई छोड्नुभयो
हामी असुविधाको लागि क्षमा चाहन्छौं,
तर स्प्रिंगबोर्ड भर्खरै क्र्यास भएको छ।
मोबाईलसब्स्ट्रेट / यसका कारण छैन
समस्या: यसले तपाइँबाट यसलाई सुरक्षित गरेको छ।
तपाईंको उपकरण अब सुरक्षित मा चलिरहेको छ
मोड सबै विस्तारहरू जुन समर्थन गर्दछ
यो सुरक्षा प्रणाली अक्षम छ।
रिबुट गर्नुहोस् (वा स्प्रिboardबोर्ड पुन: सुरु गर्नुहोस्) यसमा
सामान्य मोडमा फर्कनुहोस्। retun गर्न
यस संवादमा स्थिति पट्टी छुनुहोस्।
थप सल्लाहहरूको लागि तल "मद्दत" ट्याप गर्नुहोस्
येशू सुर्नोजालाई जवाफ दिनुहोस्
थप सल्लाहहरूको लागि तल «help tap ट्याप गर्नुहोस्।
आईफोन पुन: सुरू गर्नुहोस् ...
यस क्षणमा केवल एक मात्रले मेरो लागि सही रूपमा काम गर्यो आईओएस Loc लकस्क्रिन मौसम र साइडेट (साइडिया) हो। एक आईफोन 7S मा स्थापित। न त पूर्वानुमान, जुन अपडेट हुँदैन, वा ForecastD हाल कुनै चीजको लागि लायक छैन। यसले कम्तिमा अद्यावधिक गर्दछ र तपाईं अनुप्रयोगलाई आफ्नो मनपर्नेमा कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ फाइल> लाइब्रेरी> LockCydgets> iOS L LockScreen Weather.cydget> स्क्रिप्ट ”फाइल चयन गरेर“ config.js ”।
तपाईं बहुमत भन्न रूपमा। समय अपडेट नगर्नुहोस्।
उसले जे चाहन्छ, त्यही राख्छ।
मेरो क्याप्समा त्यहाँ सँधै RAIN को पृष्ठभूमि हुन्छ, घमाइलो छ वा छैन। र जब सूर्य घाम परेको थियो। र यो कुनै भविष्यवाणीमा थिएन। रातमा बाहिर निस्केको जस्तै, यसले सधैं दिन देखाउँदछ।
न त शृंखलाकरण न रीबुटिंग।
यो पूर्वानुमान धेरै नराम्रो छ
पेरीलाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, हो, म बुझ्दिन कि कसरी तिनीहरूले सिडिआमा ट्वीकहरू प्रकाशन गर्छन् राम्ररी परीक्षण नगरी, र भुक्तानीको शीर्षमा, पूर्वानुमानले सुरक्षित मोड समस्याहरू दिन्छ र समयलाई सहीसँग अपडेट गर्दैन। त्यो लाज बिना! मैले विकासकर्तालाई (डेभिड आश्मन) लाई ईमेल पठाएँ, कुनै प्रतिक्रिया बिना।
चिमटा सुरक्षित मोड ट्रिगर गर्दैन। यो एक अनुप्रयोग हुनुपर्दछ जुनसँग यसको द्वन्द्व छ, किनकि यसले मलाई एक पटक पनि गरेको छैन।
अद्यावधिकहरूको लागि हो, हो, जुन अपडेट गर्दछ। मलाई के थाहा छैन (र मैले विकासकर्तालाई सोधेको) हो कि उहाँ प्रायः अपडेट गर्नुहुन्छ र कसरी गर्नुहुन्छ। तर अद्यावधिक गर्नुहोस्।
हामी गम्भीर विकासकर्ताको बारेमा कुरा गर्दैछौं, त्यसैले यसले बगहरूलाई निश्चित गर्दछ
र निस्सन्देह, ट्वीक मैले परीक्षण गरें र मेरो आईफोनमा टेस्ट गर्न जारी राखें।
मसँग आईफोन and र आईफोन S एस छ र यदि मसँग मौसम मौसममा सेट गरिएको छ भने, ती दुबैमा सुरक्षित मोड गर्दछ सामान्य मोडमा फर्कने सम्भावना बिना। मसँग ट्वीक्स सायद इन्स्टल भएको छ, आउनुहोस् मसँग आधारभूतहरू, एक्टिभेटर, क्षारीय, सीसीसीन्ट्रोलहरू, स्लाइड २ किल र अन्य थोरै छ। डेभिड अश्मान क्र्याक हो र पक्कै छिट्टै यो समाधान हुनेछ। म सुरक्षित मोड को बारे मा मात्र एक हुँईन, Modmyi मा त्यहाँ केहि पनि छ जो उनीहरुलाई भयो।
अहिलेको लागि र यो थाहा हुँदैन यो कसरी अपडेट हुन्छ र प्रत्येक कहानी म IOS stick ताला लगाउनेछु मौसम stick लकस्क्रिन मौसमको साथ। मैले दुबै भुक्तानी गरेको छु।
मैले हिजो अपडेट मात्र गरें र सूर्यसँग यो minutes मिनेट चल्यो ... .. जब पानी पर्यो ..
मेरो अफिसमा हामीले पढेका टिप्पणीहरू बाहेक केही प्रयास गरेका छौं ... र तैपनि तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न .... ठिक छ, यो तपाईंको आईफोन हुनेछ। हामीले iPhone आईफोन on मा परीक्षण गरेका छौं, र अब सेफ मोडले मात्र मलाई छोड्छ
वर्षा जहिले पनि पृष्ठभूमिमा बाहिर आउँछ ... र दिनको समयमा केहि पनि अँध्यारो र रात हुँदैन।
यसलाई विश्वास गर्नुहोस्
मेरो मामलामा म यसलाई फिर्ता राख्छु जब उनीहरूले यसलाई अपडेट गर्छन् र ती विशाल बगहरू सच्याउँदछन्।
पूर्वानुमानको साथ सुरक्षित मोडको समस्या समाधान गर्न तपाईंले मौसम अनुप्रयोगमा स्थान निष्क्रिय गर्नुपर्नेछ, पूर्वानुमानले पहिलो शहर लिनेछ जुन तपाईंले म्यानुअल मोडमा थपेको छ। यस समयमा यो के हो यदि हामी सेफ मोड समस्याहरू बिना पूर्वानुमान प्रयोग गर्न चाहन्छौं, अपडेट मुद्दा अझै अलिक अनौंठो छ, कहिलेकाँही यसले राम्रोसँग काम गर्दछ र कहिलेकाँही यसले गर्दैन। यो अपडेटको लागि पर्खाइको कुरा हो।
म जिद्दी गर्दछु, पूर्वानुमानमा सेफ मोड समस्याहरू छैनन्, यो अर्को चिमट हुनु पर्छ जसले हस्तक्षेप गर्दछ। मसँग स्थान सक्रिय छ र एकपटक सुरक्षित मोडमा प्रवेश गरेको छैन। अर्को कुरा अपडेटहरू हुन्, जुन चाहिने धेरै छोडिन्छ ...
तिनीहरूले भर्खर यसलाई times पटक अपडेट गरे। कोही जसले यसलाई अहिले प्रयोग गर्दछ र संकेत गर्दछ कि यदि यो पहिले नै सही अपडेट भयो भने, कि यो अनुमान गरिएको छ कि उनीहरूले यो पहिले नै निश्चित गरिसकेका छन…।?
यस समयमा यो सँधै आईओएसबाट मौसम जानकारी मिल्दछ।
तर के तपाईंसँग स्थान सक्रिय गरिएको छ…?? किनभने यदि तपाईंसँग यो सक्रिय गरिएको छैन भने, मेरो केस जस्तै, आईओएस native नेटिभ वेदर अनुप्रयोग मात्र तपाईंले अपडेट गर्दा मात्र अपडेट हुन्छ।
हो, मैले यो सक्रिय गरेको छु।
मैले पहिले नै सबै संस्करणहरू प्रयास गरिसकें जुन बाहिर आउँदैछ र एनिमेसनहरूले मात्र तापमान अपडेट गर्दछ किनकि लिखित भविष्यवाणीले सँधै "रिमझिम" देखाउँदछ
मसँग आईफोन and र समय स्थान सक्रिय छ, विकासकर्ताका लागि धेरै नराम्रो छ, तपाईंले अनुप्रयोगहरूलाई अझ राम्रोसँग परीक्षण गर्नुपर्नेछ ती सबै उपकरणहरूमा सुरुवात गर्नु अघि, एउटा विशेष मात्र होइन।
यो हो कि हामीसंग दुई दिन भयो जुन सुहाउँदो पानी बन्द हुँदैन, त्यसैले म त्यसलाई रुजू गर्न सक्षम भएन। के अपडेट गर्दछ त्यो रातको दिन हो। त्यो पक्का छ।
उही कुरा मलाई फ्रान्कसँग हुन्छ। यो सबै दिनको वर्षामा रहेको छ। म बास्क मुलुकमा बस्छु र आज उसले सबै गर्यो। केवल तापमान अपडेट गर्नुहोस्।
आईफोन s एसमा यो रोल हुँदैन वा प्यारास हुँदैन। मैले संस्करण install ... १ install स्थापना गर्न सफल भएको छु र अनलकिंग स्क्रिन र colors्गको पार्टी हो र एकचोटि तपाईंले फोल्डरहरू अनलक गर्नुभयो भने उनीहरू पनि खराब देखिन्छन् ... शर्मनन किनभने यो राम्रो देखिन्छ, तर पट्टी छैन
वास्तवमा मलाई लाग्छ मलाई सम्झना छ कि यसले वर्णनमा राख्दछ कि4र 4s मा एनिमेसनहरू जाने छैन
हिजो यो अपडेट भयो र यो क्षणको लागि यो उत्तम छ, यसले दुबै तापमान र हालका सर्तहरू (एनिमेसनहरू) अपडेट गर्दछ। यसका साथै, मसँग लक स्क्रिनमा एनिमेसनहरू मात्र छन्, तर मैले ब्याट्रीको प्रदर्शनमा घाटा देखेको छु, के यो मलाई मात्र हुन्छ? वा के यो एक अर्को चिमनी हो जुन मलाई केहि मा प्रभावित गर्दछ
जुभिनेसीलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले यो पनि देखेको छु कि ब्याट्री कम रहन्छ, मलाई लाग्दछ कि यो सामान्य छ, जब तपाई आईफोन खोल्नुहुन्छ प्रत्येक पटक एनिमेसनले काम गरिरहेको छ भन्ने सोच्नुहोस्। पूरा दिन प्रयोग गरी एनिमेसन निष्क्रिय गरेर हेर्नुहोस् कि यसले स्वायत्ततामा सुधार आएको छ कि भनेर हेर्नका लागि।
कति पटक तपाईं यसलाई अपडेट गर्नुहुन्छ? के तपाईंले स्थान सक्रिय गर्नुभयो?
हो, म त्यसो गर्न जाँदैछु, यसलाई कसरी जान्छ भनेर हेर्नका लागि यसलाई पूरा दिन असक्रिय गर्नुहोस्
मलाई थाहा छैन कति पटक यो अद्यावधिक हुन्छ, कुनै विचार होइन तर यदि यो अद्यावधिक हुन्छ र मैले स्थान सक्रिय गरेको छैन
मैले यसलाई पुनर्स्थापित गरेको छु, अब यो सहि अद्यावधिक छ कि भनेर हेर्नका लागि। मसँग मात्र अनुप्रयोगको विकल्पहरूमा सक्रिय छ जुन मलाई दोस्रो पृष्ठमा समय देखाउँदछ। तपाईं मलाई भन्नुहोस् कि तपाईंसँग स्थान सक्रिय छैन र यसले अपडेट गर्दछ, तर तपाईंलाई कति पटक थाहा हुँदैन। के तपाईंसँग सेटिंग्स> सामान्य–> पृष्ठभूमि अपडेट–> मौसममा सक्रिय छ?
ठिकै अन्तिम संस्करण मैले यो कार्य गर्नको लागि प्रबन्ध गरेको छु, तर त्यहाँ दुई चीजहरू छन् जुन मँ साझा गर्न चाहन्छु कि कसैले मलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्दछ कि भनेर।
१.- अनलक स्क्रिन (कोड) मलाई नराम्रो देखिन्छ .. मलाई थाहा छैन यदि यो हो किनकि मैले केहि अन्य ट्वीकबाट सक्रिय गरेको छु वा यो यो यो हो कि यो एनिमेटेड पृष्ठभूमि हो र त्यस्तै तथ्यका साथ हस्तक्षेप गर्दछ।
२.- यदि तपाईं सामान्य स्क्रिनको साथ हुनुहुन्छ भने (अनलक गरिएको) र तपाईं त्यस पट्टीमा «खोजी get प्राप्त गर्न स्लाइड गर्नुहुन्छ भने म पनि खराब देखिन्छु।
अरू कोही हुन्छ
ओ हो, एक आईफोन ss
यो पहिले नै! मैले यो ठीक गरें!
यदि अरू कसैले तपाईंलाई भयो भने यो सक्रिय गर्नुहोस्
सेटिंग्स> सामान्य> पहुँचता> मोड वृद्धि विपरित
ठिकै छ, नयाँ अद्यावधिकहरूको साथ यसलाई पुन: स्थापना गरेपछि, यसले पूर्ण रूपमा काम गर्दछ ... ।यो आश्चर्यजनक रूपमा अद्यावधिक हुन्छ ... र स्थानीय मौसम अनुप्रयोगको स्थान वा पृष्ठभूमि डाटा सक्रिय गर्नु आवश्यक पर्दैन… .. अचम्म…।
अपडेट गरिएको पूर्वानुमान। अब यसले तपाइँलाई अद्यावधिक अन्तराल छनौट गर्न दिन्छ ... प्रत्येक दिन मलाई यो ट्वीक बढी मन पर्छ ...।
नमस्ते, मेरो समस्या यो हो कि मैले लामो समयदेखि पुनः बुट गरें र मलाई थाहा छैन कसले मलाई मद्दत गर्न सक्छ
येशू sornoza भन्यो
सिडियाको अपडेटसँग 7.1.1.१.१। त्यो मेरो आईफोन IN एस मा स्थापित छ पूर्वानुमान स्क्रिनमा कुनै एनिमेसनहरू छैनन्, तपाईंको स्क्रिनमा एनिमेसन गरिएको मौसमले काम गर्दैन।
Jesus sornoza लाई जवाफ दिनुहोस्
गुगल नक्शाको नयाँ अपडेटले हामीलाई सब भन्दा छिटो मार्ग देखाउँदछ